6:40 PM စမ်းချောင်း, တိုက်ခန်းအငှား No comments
မြေညီထပ်ငှားမည် ၇သိန်းခွဲ (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်)
16' x 50' (အမြင့် 14')
4:34 AM ​မြေအ​ရောင်း No comments
2:33 AM ပဲခူးမြို့, လုံးချင်းအရောင်း No comments
Ta Pin Shwe Htee road, Nanda Thuri Ya
ဂရန်​အမည်​​ပေါက်​ စိတ်​ငြိမ်​ရပ်​ကွက်​ ​ဈေးညှိနိုင်း
အိမ်ခြံမြေ ပရိတ်သတ်များသို့ တောင်းပန်ခြင်း
ကျွန်တော်အလုပ်လေး နည်းနည်းများနေခဲ့တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ကြော်ငြာပို့တွေကို ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ ယခုအခါ လာသမျှကြော်ငြာအားလုံးကို လစ်ဟင်းမှုမရှိ တင်ပို့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
3:40 AM ဒဂုံ (မြောက်) No comments
အကျယ်အ၀န်း ၄၀ ပေ × ၆၀ ပေ
ဈေးနှုန်း ၇,၅ သိန်း
3:35 AM တိုက်ခန်းအရောင်း, အင်းစိန် No comments
၁၁.၅ ပေ × ၄၅ ပေ
သရက်ခြံ(၄) လမ်း ညောင်ပင်စု အင်းစိန်မြို့နယ်
တိုက်သစ် သိန်း ၂၅၀ မြေညီထပ် အလယ်ခန်း ဖုန်း 09 73124126
12:58 PM လှည်းကူး, မြေအရောင်း No comments
Area Squart Feet	3.36 acre
ထင်းရှားသည့်နေရာ	လမ်းမဘေး၊ ဈေးနှင့်နီး၊ ကားဂိတ်နှင့်နီး
ဈေးနှုန်း သိန်း	၂၀၀၀
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သည်။ သီးပင်စားပင်မျိုးစုံစိုက်ပျိုးထား၊ လမ်းမဘေး၊ ဈေးနှင့်နီး၊ ကားဂိတ်နှင့်နီး
12:54 PM တိုက်ခန်းအရောင်း, သင်္ဃန်းကျွန်း No comments
အကျယ်အ၀န်း	12.5 ft × ft 50
Area Squart Feet	625
ထင်းရှားသည့်နေရာ	ကညနရုံး. စံပြ​ဈေး၊
ဈေးနှုန်း	265 သိန်း။
ဂရမ်​​မြေ​ပေါ်တွင်​​ဆောက်​..BCCကျပီး..၅လွှာ​မြောက်​ အ​ပေါဆုံးလွှာအပြည့်​​ဆောက်​..သံသံပန်​တခါး.. ဆန်းရှိတ်​ ပတ်​လည်​.. မျက်​နှာကျက်​ တပ်​ပြီး.. အခန်း၂ခန်း၊ လူတရပ်​လွတ်​​သော ထပ်​ခိုးပါ.. ကြမ်းခင်း နံရံ ​ကြွေပြား အပြည့်​ခင်းကပ်​။ မီးဖိုခုံ ဘိုထိုင်​.. air con1..TVစင်​၊ အလူမီနီယမ်​ ဘုရားစင်​။ ရတနာလမ်း သံသုမာ လမ်း ​လေး​ထောင့်​ကန်​ ၃လမ်းလုံးမှ သွားလာနိုင်​။ ဝယ်​သူတိုက်​ရိုက်​ ​ဈေး။
12:52 PM တိုက်ခန်းအရောင်း, ဒေါပုံ No comments
Area Squart Feet	9
​၂လွာ ၂၅၀., ၊ ၃လွာ ၂၄၀ ။ ၄လွာ၂၂၀။ ၅လွာ၂၀၀ ။
ပွဲစားခ . 2%​ပေးမည်
မြေညီထပ် တိုက်ခန်း ရောင်းရန်
12:22 PM တိုက်ခန်းအရောင်း, လှိုင် No comments
အကျယ်အ၀န်း	12 ft × 50 ft
ထင်းရှားသည့်နေရာ	သီရိမြိုင်ဘူတာအနီး ဗဟိုလမ်းမမှ ၂ အိမ်ကျော်ဝင်ရုံသာ
ဈေးနှုန်း	၄၃၀ သိန်း (အလျော့အတင်းရှိ)
ဆက်သွယ်ရန်	0973036886 09795551173
ရန်ကုန်မြို့ အချက်အချာနေရာ၊ တိုက်အသစ် (စည်ပင်ခွင့်ပြု ပြီး) မြေညီထပ်၊ ခေါင်းရင်းခန်း၊ ရေလှောင်ကန် ၂ ခုပါ။ မီးဖို၊ ဘေစင် ပြုလုပ်ပြီး ကြွေပြားကပ်၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ၊ Pressure Pump။ ကျောင်းနီး၊ ဈေးနီး၊ ဘူတာရုံနီး
4:49 PM တိုက်ခန်းအရောင်း, မရမ်းကုန်း No comments
အကျယ်အ၀န်း	= 12 ft × 30 ft
ထင်းရှားသည့်နေရာ	Ba Yint Naung
ဈေးနှုန်း	255 သိန်း
၄ လွှာ ၃၅၅ သိန်း
၅ လွှာ ၂၅၅ သိန်း
ရောင်း/ငှား/၀ယ် ငှားရန်ရှိသည် အမျိုးအစား တိုက်ခန်း ...
Home.apk ====== Home အိမ်ခြံမြေ ရောင်း/ဝယ်/ငှား သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန် တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ငှား လုပ်နိ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆောက်လုပ်နေသည့် တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာများကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အစီအမံဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းများ ...
မြေညီထပ်ငှားမည် ၇သိန်းခွဲ (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်) စမ်ချောင်းဗဟိုလမ်းမ ရှမ်းလမ်း/ဇေယျဝတီလမ်း 16' x 50' (အမြင့် 14') ဆက်သွယ်ရန် ၀...
လှည်းတန်း တွင် တိုက်ခန်3းသိန်း သုံးမည်။ မြေညီထပ်မလိုပါ။ ဆက်သွယ်ရန်-09-31 777 298
တည်နေရာ ဆီဆုံလမ်း (စမ်းချောင်းမြို့နယ်) အကျယ်အ၀န်း 25&#...
​မြေ ​ရောင်းရန်ရှိသည် =========== လောင်းလုံးမြို့နယ်​ ထင်းရှားသည့်နေရာ တီဇစ်​ကမ်း​ခြေအနီး ထားဝယ်မြို့ ဈေးနှုန်း သိန်း၁၇၀၀ ဆက်သွယ်ရ...
ရောင်းရန်ရှိသည် တိုက်ခန်း အကျယ်အ၀န်း	= 12 ft × 30 ft မြို့နယ်	Mayangone ထင်းရှားသည့်နေရာ	Ba Yint Naung တစ်ယောက်အိပ်ခန်း	0 နှစ်ယောက်အိပ...
မြေရောင်းမည် ========== တည်နေရာ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း။ရန်ကုန်။ ၇၉ ရပ်ကွက်။ မြေအမျိုးအစား ပါမစ်မြေ။ အကျယ်အဝန်း ၈၀'x၆၀' မြေကွက်အမှတ်(၇...
ရောင်းရန်ရှိသည် လုံးချင်းအိမ်အကျယ်အ၀န်း Feet40×60 အိမ်နံပါတ်4/59 Ta Pin Shwe Htee road, Nanda Thuri Ya Bago တစ်ယောက်အိပ်ခန်3း နှစ်ယေ...
Theikdi Maung. Powered by Blogger.
Free ၀န်ဆောင်မှုပေးသည် (1) Home.apk (2) ကမာရွတ် (1) ကွန်ဒိုအ၀ယ် (2) ကွန်ဒိုအငှား (5) ကွန်ဒိုအရောင်း (3) စက်မှုဇုန် (1) စမ်းချောင်း (5) တာမွေ (4) တိုက်ခန်းအ၀ယ် (1) တိုက်ခန်းအငှား (7) တိုက်ခန်းအရောင်း (23) ဒဂုံ (3) ဒဂုံ (ဆိပ်ကမ်း) (1) ဒဂုံ (အရှေ့) (4) ဒဂုံ (တောင်) (1) ဒဂုံ (မြောက်) (4) ပန်းဘဲတန်း (1) ပုဇွန်တောင် (1) ပဲခူးမြို့ (1) ဗဟန်း (4) မရမ်းကုန်း (12) ရန်ကင်း (1) လမ်းမတော် (1) လှည်းကူး (2) လှိုင် (2) လှိုင်သာယာ (2) လုံးချင်းအ၀ယ် (1) လုံးချင်းအငှား (1) လုံးချင်းအရောင်း (19) သင်္ဃန်းကျွန်း (6) သတင်း (5) အင်းစိန် (3) တောင်ဥက္ကလာပ (10) ဒေါပုံ (1) မှော်ဘီ (1) မြေအ၀ယ် (1) ​မြေအ​ရောင်း (10) မြောက်ဥက္ကလာပ (1) ရွှေပြည်သာ (2) ရွှေပေါက်ကံ (1)
မြ၀တီ - မြ၀တီ
Free ၀န်ဆောင်မှုပေးသည် Home.apk ကမာရွတ် ကွန်ဒိုအ၀ယ် ကွန်ဒိုအငှား ကွန်ဒိုအရောင်း စက်မှုဇုန် စမ်းချောင်း တာမွေ တိုက်ခန်းအ၀ယ် တိုက်ခန်းအငှား တိုက်ခန်းအရောင်း ဒဂုံ ဒဂုံ (ဆိပ်ကမ်း) ဒဂုံ (အရှေ့) ဒဂုံ (တောင်) ဒဂုံ (မြောက်) ပန်းဘဲတန်း ပုဇွန်တောင် ပဲခူးမြို့ ဗဟန်း မရမ်းကုန်း ရန်ကင်း လမ်းမတော် လှည်းကူး လှိုင် လှိုင်သာယာ လုံးချင်းအ၀ယ် လုံးချင်းအငှား လုံးချင်းအရောင်း သင်္ဃန်းကျွန်း သတင်း အင်းစိန် တောင်ဥက္ကလာပ ဒေါပုံ မှော်ဘီ မြေအ၀ယ် ​မြေအ​ရောင်း မြောက်ဥက္ကလာပ ရွှေပြည်သာ ရွှေပေါက်ကံ
Copyright © အိမ် ခြံ မြေ | Powered by Blogger